Ambassadors muMadrid vakakoka kuUNWTO Bribery Cocktail kuRitz: Ndiani ari kuenda?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Ambassadors muMadrid vakakoka kuUNWTO Bribery Cocktail kuRitz: Ndiani ari kuenda?
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hotera & Resorts • misangano • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vhiki rino Munyori Mukuru weUNWTO achange achivaraidza vamiriri vese venyika dziri nhengo dzakatenderwa muSpain nekashamba kekunaka pahotera yakasarudzika uye inodhura muMadrid- iyo Ritz.
UNWTO inoda kupa chiokomuhomwe vamiriri pakudya kwemanheru kana zvinwiwa - uye zvinoratidza.
Zurab Pololikashvili, iye zvino munyori-mukuru weWorld Tourism Organisation achaita danho svondo rino, maererano neruzivo rwakagamuchirwa na. eTurboNews Zvitubu.
Muna Ndira kwaivewo kudya kwemanheru muMadrid, saka iyi inhamba yechipiri.
Ndivanaani vamiririri vanoda kuenda kuchiitiko chakadai chinotsigirwa neGeorgia kana UNWTO, uye zviri pachena kuti yakagadzirirwa kuchengetedza kusimbiswa kweZurab Pololikashviluye kwechikamu chechipiri cheMusangano Mukuru
Chiitiko ichi chakagadzirwa zvakajeka, saka maAmbassador haabvunze mibvunzo kana kutsigira vhoti yakavanzika paGeneral Assembly. Ndinovimba, runyoro rwevaenzi ruchabuda.
Nzvimbo yeMadrid ndiyo Ritz:
Mandarin Oriental Ritz, Madrid inzvimbo yakasarudzika yeBelle Époque iri mune yakakurumbira Golden Triangle yeArt yeMadrid. Kwemakore anopfuura 110, hotera iyi yave iine madzimambo, vanoremekedzwa, uye vamwe vevaenzi vane mukurumbira kubva pasirese. Iyi inoshamisa pfuma ndiyo epitome yeumbozha uye kugona.
Kuita kuti UNWTO General Assembly ibve kuMorocco ichienda kuMadrid paminiti yekupedzisira zvinotarisirwa kuti ruzhinji rwenyika dzichapinda mugungano iri dzichamiririrwa nevamiriri vari muMadrid.
Uyu mukana wakajeka uye wakaverengerwa Zurab kuchengetedza vhoti yake yekusimbisazve. Zurab aive mumiriri weRepublic of Georgia muMadrid kwemakore akati wandei uye anoziva nzira yake munharaunda yevamiriri.
Akatoita kuti kutora chikamu kwemakurukota ekushanya kwakaoma uye kunodhura. Idzo nyika dzine maembassy muSpain dzinowanzotumira vamiriri, dzimwe nyika zhinji hadzitarisirwi kutora chikamu zvachose.
Iyo Advantage yekuti Ambassadors vavhote pane makurukota ekushanyirwa kwenyika
Ambassadors vari nyore zvikuru kugutsikana naSecretary-General. Zurab anofanirwa kudzivirira chikumbiro chekuvhota chakavanzika kuti achengetedze kugadzwa kwake zvakare.
Anofanirwa kuve neruzhinji rwe2/3 yenyika dziri kupinda nhengo dzichivhotera kusimbiswa kwake zvakare.
Mumwe munhu anoshamisika kuti inyika ngani dziri nhengo, dzisingakwanise kubhadhara mipiro yadzo uye dzichishuvira rubatsiro rune musoro kubva kusangano reUN, dzicharamba zviito zvakanyanyisa kudaro.
Zurab anoda kuvaraidza, uye zvakagara zvichimushandira.
Humwe husiku Dare repamusoro risati ravhotera kusarudzwa kwake zvakare muMadrid uye mudanho repachivande reWorld Tourism Organisation, chisvusvuro chakagadzirirwa kupa chiokomuhomwe kunyika makumi matatu neina chakawedzerwa kuchirongwa cheUNWTO Election muna Ndira 34.
Chef weSpanish ane mukurumbira Dani García achagadzirira kudya kwechiokomuhomwe paFour Seasons Hotel muMadrid yakabhadharwa uye kupindwa neGurukota rezvekunze reGeorgia.
Izvi zvakaita kuti mumiriri ega anokwikwidza naZurab atsamwe zvikuru uye zvakakonzera tsiye kwese kwese. Mumiriri aikwikwidza kubva kuBahrain haana kuenda kuchisvusvuro.
Muna 2017 kudya kwemanheru kwakatsiviwa nekukoka vamiririri vanovhota kumutambo wenhabvu wakatengeswa, neruremekedzo nemumiriri weGeorgia muMadrid.
UNWTO yagadzirira kupa chiokomuhomwe Nyika makumi matatu neina paKudya kwemanheru, Georgia…
Sarudzo yeUNWTO yakangouraya chero hunhu hwakasara mu…
UNWTO kusaremekedza Bahrain kutyora JIU…
Geoffrey Lipman anodaidzira Decency muUNWTO…
Senguva dzose, eTurboNews akaedza kusimbisa neUNWTO, asi hapana mhinduro yakagamuchirwa. Bon Apetit!